umlando Development - Xizi Elevator Co., Ltd
Kuqondile umgibeli ukugeleza
Ovundlile umgibeli ukugeleza
Xizi ithwala phambili quintessence of umqondo ukuthuthukiswa ikheshi kweminyaka eyikhulu, ifa nakho kanye nobuchwepheshe of ikheshi umkhakha ka engaphezu kwengu-30, inamathele emisha eqhubekayo futhi njalo igcina sengqondo ozinikele, ezikhethekile kanye concentrative ukuba ukuthuthukiswa kwebhizinisi.
Kule minyaka edlule, ngesikhathi ukuxhawula abaqotho ikhasimende, nesikhathi Ukubambisana eduze ikhasimende ngalinye ngalinye .... konke ubufakazi kusengaphambili Xizi sika. Kuyinto yingenxa ukumamatheka bangempela njalo, Xizi uye Kwasheshe izisulu engenile enkundleni ngamazwe kusuka emakethe yasekhaya.
Iqoqa amathalenta abaphezulu ku ukusebenza kwamabhizinisi kanye nokuphathwa, professional lokuqala rate ihlanganiswe ukumaketha amathalenta, enamandla ucwaningo umkhiqizo nokuthuthukiswa amathalenta kanye abanolwazi ubuchwepheshe nokwakhiwa amathalenta, Xizi ithimba ngiqiniseka ukuletha sithembekile ukumomotheka emhlabeni wonke.
Ngo-2016, ngempumelelo umkhankaso imikhiqizo emisha ehlukahlukene, kuhlanganise disc uhlobo motor ultra-mncane futhi Victor MRL (T) ikheshi nge Igumbi umshini, XEC-6000 ukulawula-drive ihlanganiswe esizihambelayo ephephile.
Ngo-2015, Xizi Industrial Park ezikhazimula embonini, ukhishwa isihloko top-100 kwamabhizinisi esifundazweni Zhejiang.
Ngo-1997, Xizi Otis ikheshi Co., Ltd. yasungulwa ngokusemthethweni.
Ngo-1996, "Xizi" wagxuma wama No.1 brand kazwelonke emakethe yasekhaya.
Ngo-1993, Xizi akhishelwe khona-ke ikheshi lokuqala lokufaka nokukhipha Vietnam.
Ngo-1981, Xizi Elevator yasungulwa ngokusemthethweni.